အလန်းဇယား စော်လေးတွေက ဘယ်လို ချူဆီ ကြမလဲဆိုတာ ကြည့်ကြမယ်နော်..
လင်းဦးမောင် နဲ့ မြကလေး (သို့မဟုတ်)
ဂျာကြီး နဲ့ မြတ်နိုး (သို့မဟုတ်)
ဘာတွေလဲ? ဘယ်လိုလဲ? အိုးချင်းထားလို့ အိုးချင်းထိသလား ?
ကျေးတောသူလေး မြကလေး (ခေါ်)
ကေတီဗီက အသစ်ကလေး ''မြတ်နိုး" နဲ့ ဂျာကြီး ''လင်းဦးမောင်" တို့
ဘာတွေ ဘယ်လို ဆက်ဖြစ်ကြမှာလဲ ?
ဘူက ဘူ့ကို ချူဆီထည့်မှာလဲ...? ဆိုတာ
မကြာခင် အချိန်အတွင်း ပြောပြပါမယ်လို့.....
ချူဆီ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို ရုံတင်ပြသပေးနေပါပြီနော်...
ဒါရိုက်တာ အကယ်ဒမီ မင်းဦး